Podcast 8x28: Mmelite cascoporro | Esi m mac
Podcast 8 × 28: Mmelite na cascoporro
Anyị enweela pọdkastị ọhụrụ dị nke anyị na-agbasa ozi n'abalị ụnyaahụ, oge a nọmba 28 nke asatọ oge. Na Podcast a anyị nwere mkparịta ụka na-atọ ụtọ ma dịkwa jụụ gbasara ozi Apple gbakwunyere na nsụgharị ikpeazụ nke OS ya, ma macOS, iOS, tvOS na watchOS. Ke adianade do, anyị na-enyocha ọhụrụ beta nsụgharị ulo oru ụnyaahụ maka mmepe, mbata nke Worlflow ka Apple, na okwu nke British Home Secretary mgbe London ọgụ na London ọgụ na ezoro ezo ozi usoro ma ọ bụ hackers onye jụrụ Apple mgbapụta nke na-eche " zuru "akaụntụ iCloud nke yiri ka ụlọ ọrụ Cupertino gọrọ ya.
Anyị nwekwara pọdkastị dị na akaụntụ iTunes maka ndị na - enweghị ike lee vidiyo ahụ ozugbo na Youtube, ma ọ bụrụ na ị nwere oge ebe a n'okpuru anyị na-ahapụ gị n'abalị ikpeazụ si na nwunye:
Chetakwa na ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkọrọ ndị ezinụlọ gị, ndị enyi gị, ndị agbata obi gị, ndị ị maara na ndị ọzọ, anyị ga-enwe ekele maka ya. Dị ka mgbe niile, na-eso gị iTunes ọwa na-enweta site na njikọ ọzọ na ebe ị ga-ahụ pọdkastị niile. I nwekwara ike soro anyị na netwọkụ mmekọrịta ma kesaa echiche gị, ajụjụ ma ọ bụ ntụnye gị oge ọ bụla, ndị otu PodcastApple na-anabata ha. Cheta na ị nwekwara ike iji hashtag #podcastapple na Twitter Na mgbakwunye na ọwa ndị ọzọ, netwọkụ mmekọrịta na-enwe ike ịkpọtụrụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Podcast 8 × 28: Mmelite na cascoporro